Ndeipi nzira dzekugadzira motokari inoita e-commerce backlinks?
Kana mashandisirwo emagetsi ekutsvakurudza akashandiswa kunzvimbo yako, inobatsira bhizinesi rako kuti rive rakakwirira pane peji yehutsva rekutsvaga uye inounza kufamba kwakasimba kwemavara. Inoita kuti injini yekutsvaga kugadzirisa inokosha zvikuru kune ecommerce website. Kana ikaitwa muhurukuro nehuwandu hwemagetsi ekutengeserana, yekutengesa email, nemamwe mapurogiramu ekupikisa, inoita chero bhizinesi rekutsvaga iri kubudirira.
SEO mune zvayo maitiro anogona kugoverwa ku-off-and-page optimization. Kushandura-peji kunoreva maitiro ose ari pa-site anobatsira kuvandudza ruzivo rwemushandisi newebhurosi yako. Uyezve, iyo inobatsira kubatsira mitsva yekutsvaga kuti inzwisise kuti nzvimbo yako ndeyekuvabvumira kuti vatiratidze iyo yakakodzera yekutsvaga mutsva. Off-page optimization inoshumira kuita injini dzekutsvaga kusarudza chaizvo iwe webhuji yako seyo inonyanya kukosha kumubvunzo wemushandisi. Chikamu chikuru cheizvi chinouya kubva kumaslinks. Iwe unofanirwa kuwana hutano hwakakosha kubva kune dzimwe niche dzakabatana nehutano hwehutano kuitira kuti nzvimbo yako ionekwe kune vateereri vako.
Backlinks mumagariro avo akaparadzaniswa kuva dofollow uye nofollow. Dofollow backlinks ndeaya anopa webhusaiti yako SEO. Kubatana kwakadaro kunoshumira sevhoti kubva kune dzimwe nzvimbo.
Zvimwewo, hapana kufungira kumashure kunosangana apo munhu ari kupa backlink iyo isingatengesi chero chinhu chipi zvacho kune imwe nzvimbo yakabatana. Kuti uite chibatanidza nofollow, munyori anongoda kuwedzera zvinyorwa zvinyorwa kune HTML yekubatanidza. Kuongorora HTML code, unogonawo kuudza kana link inotevera kana inotevera. Semuenzaniso, hurukuro yakawanda yehutano kubva kuYouTube, Facebook, blogs, uye maforamu zvinenge nguva dzose dzisina. Icho chichiri chakanaka nokuda kwechiremera chako chechirongwa, asi hachigone kukupa chero kukurudzira mukutsvaga kwejini injini.
Nzira yekuziva sei kukosha kweshamwari dzinosvika?
Pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokosha zvinofanira kutorwa munyaya pakusarudza kukosha uye kukanganiswa kwemashure.
Ngatikurukurei zvimwe zvakakosha zvakasununguka kumashure:
Kubudiswa kwekunze kubva kune nzvimbo dzakakwirira kunobatsira pakugadzira webhusaiti pane izvo zvinobva kune zvisingabatsiri uye zvisingabatsiri nzvimbo;
Shanduro dzinobva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana dzinounza huwandu hwekutsvaga pawebsite yako pane hutano kubva pazvikwata zvakabatana newe;
Kutarisana nehutano links zvinogamuchirwa nevashandi zviri nani kudarika zvisinganzwisisi nehurukuro;
Sangano rinokosha uye rakanyatsogadziriswa zvinyorwa zvinyorwa zvinodarika mamwe mazita makuru anokosha, kunyanya kana akanzwika sezita rako.
Nzira yekugadzira traffic inogadzira backlinks?
Nzira yakareruka yekuwana zvakakonzerwa nehupenyu hwehutano panzvimbo yako yekutengeserana ndeyekuumba zvinhu zvakakura uye zvinokurudzira zvakanyorwa, vhidhiyo kana fomu yemazwi iyo vashandi vachagoverana nezvavanoda.
Gadzira zvishandiso zvekugadzira
. Izvo zvichangoita zvigadziriswe zvinyorwa zvekutsvaga kunzvimbo yako Source .